Ukukhulelwa - iBezzia | IBezzia
El ukukhulelwa Yinkqubo leyo umfazi ahamba kuyo ukuya kufumana umntwana kwaye ivelisa kuye iseti yempilo ebalulekileyo, utshintsho lomzimba kunye nobuhle. Linyathelo elifunekayo lokuzala umntwana kwaye libonisa uthotho lwemiceli mngeni ekufuneka sijongane nayo yonke ingcaciso eyimfuneko: ithatha iinyanga ezilithoba eziqala kwiinyanga zokuqala, apho kukho umngcipheko omkhulu wokuqhomfa okuzenzekelayo, kude kube umzekelo ukuqala kwekota yesithathu kuthathwa njengendawo yokusebenza komntwana.
Ukongeza kwi ulwazi ukuba wonke umntu obhinqileyo ufuna ukujongana nalo mzuzu, siya kunika iingcebiso zokuwuthatha ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ungaziphatha njani izinto ezahlukileyo emzimbeni, izinto ezahlukeneyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukuyiphatha ngendlela eyiyo kwaye wazi iingxaki ezinokubakho ukuzola.
Ngokukwanjalo, siza kuxela ukuba le nkqubo yenzeke njani ngamaxesha ahlukeneyo.
I-Toxoplasmosis sisifo esosulelayo, esibangelwa yi-microscopic organism ebizwa ngokuba yi "toxoplasma gondii" ngoko ke igama layo ...
Ukutya kweMeditera ukuba nawuphi na umfazi okhulelweyo kufuneka athathe
Ukutya yinto ephambili xa kufikwa ekunakekeleni ukukhulelwa kunye nokufumana usana lukhule…
Hydramnios ekukhulelweni, yintoni na kwaye iphathwa njani
Ngexesha lokukhulelwa, iintlobo ezahlukeneyo zeengxaki zingenzeka, ezinye ngokubhekiselele kwi-amniotic fluid. Kule meko makhe...
Indlela yokutshisa ilanga ngelixa ukhulelwe ngokukhuselekileyo
Ukuba ufuna ukutshisa ilanga ngexesha lokukhulelwa, kufuneka uthathe uthotho lwamanyathelo okhuseleko ukwenza oko ngokukhuselekileyo. Ndiyazi…
Imiphumo emibi yoxinzelelo ekukhulelweni
Iziqendu zoxinzelelo zoxinzelelo ngexesha lokukhulelwa zinokuba zimbi kakhulu, kumama nakwimpilo…
Indlela umzimba utshintsha ngayo ngexesha lokukhulelwa
Kukho utshintsho oluninzi olwenzeka emzimbeni ngexesha lokukhulelwa, nangaphambi kokuba umfazi akwazi…
I-Perineal massage, ukuqala nini
I-Perineal massage iluncedo kakhulu ukuba yenziwa ngexesha elifanelekileyo kunye nobuchule obufanelekileyo. Ibonelela...
Yintoni iblues yosana okanye i-mild postpartum depression?
Ukukhulelwa kunye nokubeleka kubandakanya uthotho lweenguqu zomzimba nezengqondo kumfazi okhulelweyo. Emva...
Iingcebiso kunye namaqhinga okuphepha amanqaku olula ekukhulelweni
Abasetyhini abaninzi banengxaki yokoyika amanqaku ngexesha lokukhulelwa, esinye isiphumo sotshintsho oluninzi lomzimba…
Ngaba uyazi ukuba iiveki zokukhulelwa zibalwa njani?
Xa ukhulelwe, ufumana izinto ezinomdla kakhulu ukuza kuthi ga ngoku. Izinto ezinje ngokubala iiveki ze…
Iimvavanyo zokukhulelwa, zibandakanya ntoni?
Uhlalutyo olwenziwayo ngexesha lokukhulelwa lubaluleke kakhulu ukuba ukwazi ukuqinisekisa ukuba yonke into yenzeka ngaphakathi…